विश्वकप फुटबल कसरी हेरिरहनुभएको छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः असार १२, २०७५ - साप्ताहिक
विश्वकप फुटबल कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
हिजोआज सुटिङमा व्यस्त छु । विश्वकप फुटबल हेर्ने ठूलो रहर थियो तर सबै ठाउँमा लाइभ हेर्ने सुविधा उपलब्ध नहुने भएकाले मोबाइलमा स्कोर हेरेर अपडेट हुन्छु ।
अभिनेत्री तथा निर्देशक
म केही दिनअघिसम्म दुबईमा थिएँ । त्यहाँ समय नमिलेर राम्रोसँग खेल हेर्न पाइनँ तर अर्जेन्टिना र आइसल्यान्डको खेल भने फेसबुक लाइभमा हेरेँ । अहिले नेपालमै छु, त्यसैले परिवार तथा साथीहरूसँग बसेर हेरिरहेकी छु ।
यसपालिको विश्वकप फुटबल कहिले टेलिभिजनमा त कहिले मोबाइलबाट हेरिरहेकी छु ।
पल शाह, अभिनेता
आफूले समर्थन गरेको टिम छ भने साथीहरूसँग बसेर रमाइलो गर्दै हेरिरहेकी छु ।
धेरैजसो खेल घरमै बसेर हेरिरहेको छु । कुनै–कुनै खेल भने फेमिली ग्यादरिङमा बाहिर गएर पनि हेर्ने गरेको छु । मैले अर्जेन्टिना र आइसल्यान्डको खेल नक्सालमा हेरेँ ।
विद्यार्थी नेता, नेविसंघ
साथीभाइ एवं परिवारका साथ हेरिरहेकी छु ।
नीता ढुङ्गाना, अभिनेत्री
साथीभाइ मिलेर हेरिरहेका छौं ।
रमिला न्यौपाने, गायिका
साथीभाइ जम्मा भएर हेरिरहेकी छु ।
दुर्गेश थापा, गायक तथा मोडल
म फुटबलको त्यस्तो क्रेजी त होइन, तैपनि फुटबल एकदमै मन पर्छ । त्यसैले अनलाइनमार्फत लाइभ हेरिरहेको छु ।
विश्वकप फुटबल कहिले घरमै त कहिले साथीहरूसँग लाउन्जमा हेरिरहेको छु ।
शक्ति गौचन, क्रिकेटर
समय मिलेका बेला साथीहरूको ग्यादरिङमा हेरिरहेको छु, तर धेरैजसो घरमै साथीहरूसँग हेर्छु ।
बिमल घर्तीमगर, फुटबलर
आफूले समर्थन गरेको खेल आफ्नै घर–परिवारसँग बसेर हेरिरहेकी छु । कहिलेकाहीँ कसले जित्छ भनेर साथीहरूसँग लन्ज डिनरको बाजी पनि थापिरहेकी छु ।
प्रश्ना शाक्य, गायिका
विश्वकप फुटबलले गर्दा विश्वभरका मानिसका लागि महान् चाड आएजस्तै भएको छ । यस्तै स्थिति मेरो परिवारमा पनि छ । त्यसो त धेरैजसो खेल घरमै परिवारसँग हेरिरहेको हुन्छु । मैले उद्घाटन खेलचाहिँ किङ्स लाउन्जमा हेरेँ । त्यसपछि भने साथीभाइ एवं घरपरिवारसँग रमाइलो गर्दै हेरिरहेको छु ।
कहिले घरमा एक्लै त कहिले साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै हेरिरहेकी छु । मैले अनुमान गरेको र समर्थन गरेका राष्ट्रले खेल जितिरहेका पनि छन्, जसले गर्दा साथीहरूलाई बाजीमा हराइरहेकी छु ।
विश्वकप फुटबलले यतिबेला विश्वभर उमंग ल्याएको छ । मैले यो उमंगलाई घरपरिवार एवं साथीभाइहरूमाझ साटिरहेकी छु । हामीले घरमै बसेर खेल हेरिरहेका छौँ । अब सेमिफाइनल तथा फाइनल चरणका केहि खेलचाहिँ बाहिर गएर हेर्ने योजना बनाएका छौँ ।
झरना थापा, अभिनेत्री
मैले अहिलेसम्मका खेल सकेसम्म छुटाएको छैन । कहिले एक्लै त कहिले साथीभाइहरूसँग बसेर हेरिरहेको छु । यसरी फरक–फरक वातावरणमा हेर्दा निकै रमाइलो हुँदो रहेछ ।
लिगको अनन्त दाउ
असहाय बालकहरूको सहयोगमा सहारा
फिक्का लिगको तीतो सत्य
आफ्नो शरीर फिट राख्न के गर्नुहुन्छ ? माघ २१, २०७५
विदेशमा भएको धन फिर्ता गर्न के गर्नुपर्ला ? माघ १३, २०७५
नेपाली चलचित्र लगातार फ्लप हुनुको कारण के होला ? माघ ७, २०७५
माघे संक्रान्तिको रमाइलो पक्ष के हो ? पुस २९, २०७५
जाडो महिनामा कति पटकसम्म नुहाउनुहुन्छ ? पुस २२, २०७५
तपाईंले बिर्सन नसक्ने न्यू इयर सेलिब्रेसन कुन हो ? पुस १६, २०७५
जाडोमा सबैभन्दा झ्याउ लाग्ने कुरा के हो ? पुस १०, २०७५
तपाईं विवाहपछि हनिमुन जानुभएको ठाउँ कुन हो ? पुस ६, २०७५
तपाईंलाई नेपाली नेताहरूको मन नपर्ने बानी के हो ? मंसिर २५, २०७५